Umaka: Ezentengiselwano | Martech Zone
Esinye sezifundo eziningi engisifunde ngenkathi ngise-IRCE ukuthi, kubakhiqizi nakubakhiqizi, i-ecommerce yayingeyona kakhulu isitolo sabo se-inthanethi njengoba yayiphathelene nezitolo ezisezansi ezazikwazi ukuthengisa nokusabalalisa izimpahla zazo . Njengoba izitolo ze-ecommerce zakha futhi zikhuthaza ubudlelwano obuvelele namakhasimende abo, bangabheka eminye imikhiqizo nabakhiqizi ukukhulisa uhlu lwabo lwezimpahla abazoluthengisela labo
Ngaphakathi kwesikhala sobuchwepheshe bokumaketha, kube nokukhula okukhulu ngeSoftware njengeSevisi kanye nokukwazi ukuthenga okudingayo ngaphandle kwebhokisi. Ngokuhamba kwesikhathi, i-SaaS yehlule izindleko zokwakha futhi izinkampani eziningi ze-SaaS zasuka njengoba zanqoba ukwakhiwa kuqhathaniswa nokuphikisana kwesabelomali. Eminyakeni eyalandela, futhi abathengisi bazithola sebengene komunye umgwaqo onqamula indlela. Iqiniso ngukuthi ukwakhiwa kuyaqhubeka ukwehla kumanani entengo. Kunezizathu eziningana zokuthi kungani
Kungani iMagento iqhubeka nokuhola imboni ye-Ecommerce CMS
NgoMgqibelo, Januwari 17, 2015 NgeSonto, uJanuwari 18, 2015 Douglas Karr
Amasayithi e-Ecommerce abekade ewukutshala imali futhi adingeka ekutshalweni okungafakwa kuphela izinkampani zamabhizinisi. Njengoba abathengi abaningi ngokwengeziwe bethenga online, abathengisi bayaqhubeka nokubona ukwehla ekuvakasheni kwesitolo - ngakho-ke kubalulekile ukuthi bakhe ubukhona be-ecommerce futhi bazame ukubuyisa isabelo semakethe. Ngenkathi kunamapulatifomu amahle laphaya ahlanganisa ukusingathwa, ukusetshenziswa okulula, insizakalo ngisho nephuzu lezinhlelo zokuthengisa… iningi eliphezulu